Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Ukungalingani kwe-Vaccine kungathintela ukubuyiswa kwakhona kwehlabathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica ufuna ubulungisa kugonyo lwehlabathi
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett ugxininise ukuba ukwanda kokufikelela kwihlabathi kumachiza e-COVID-19 ngoyena ndoqo kukhenketho olusekwe ngokubanzi kunye nohlaziyo lwezoqoqosho lwehlabathi. Oku, nanjengoko wayekhalaza ngefuthe elibi lokungabikho kwento yokugonya, athe inokuthi ithintele ukubuyela kwakhona emhlabeni.
Ukugonywa ngokulinganayo kwihlabathi liphela ayisiyonyanzeliso lokuziphatha kuphela kodwa ikwabonisa nengqondo yexesha elide.
Ukungalingani kweyeza lokugonya kuyaqhubeka apho nangaphezu kweedosi ezi-6 zezigonyo ezisasazwe kwihlabathi liphela, uninzi lwezi zikumazwe anengeniso ephezulu.
Amazwe ahluphekayo angaphantsi kwe-1% yabemi bawo agonyiweyo.
“Akusayi kubakho kuphila kubanzi ngaphandle kokuphela kwengxaki yezempilo. Ukufikelela kwizitofu zokugonya isitshixo kuzo zombini. Ngelishwa, kweli nqanaba lobhubhane, ukungalingani kokugonya kuyaqhubeka apho nangaphezu kweedosi ezingama-6 zezigonyo ezisasaziweyo, uninzi lwezi zikumazwe anengeniso ephezulu kanti awona mazwe ahlwempuzekileyo anabantu abangaphantsi kwe-1% yabemi abagonyiweyo. Siyavuma ukuba ugonyo olulinganayo lwehlabathi aluyonyanzeliso lokuziphatha kuphela kodwa lukwanazo ixesha elide kuqoqoshoUtshilo uMphathiswa.
UMphathiswa wenze le ngxelo izolo (nge-6 ka-Okthobha), ngexesha lesigqeba soMbutho waMazwe aseMelika (i-OAS) Intlanganiso yamashumi amabini anesihlanu ye-Inter-American Congress yaBaphathiswa kunye namaGunya aPhezulu oKhenketho. Idibanise amagosa aphezulu abakhenkethi, kunye nabameli becandelo lezorhwebo, izifundiswa, kunye noluntu, ukuvavanya izicwangciso zokunciphisa iziphumo ezibi ze-COVID-19 kukhenketho, kunye nokhenketho emva kwe-COVID-19.
Ngexesha lokuthetha, ukhuthaze iinkokheli zamazwe ahambele phambili ukuba babelane ngezitofu zokugonya kunye namazwe anengeniso ephantsi, esithi, ulungelelwaniso kunye nentsebenziswano zizinto eziphambili ekuqinisekiseni inkqubo efanelekileyo yokugonya.
“Ngokunikwa uphawu lobhubhane, kunye ne-COVID-19, ngakumbi, akunakubakho ukhenketho oluzinzileyo noluzinzileyo lwehlabathi apho amazwe anengeniso esezantsi eshiye ngasemva. Esi sisiseko se-Ajenda yowama-2030 yoPhuhliso oluZinzileyo-hleze silibale. Ngokunxulumene noku, siyazamkela kwaye sinombulelo ngezipho zezitofu ezisuka kumaqabane ethu aphuhlileyo kwaye singagxininisa ukuba ezi kufuneka zibe zizipho ezisexesheni nezisebenzayo, kuthathelwa ingqalelo imihla yokuphelelwa kwezitofu, ”utshilo.
Ngexesha leseshoni abaphathiswa kunye nabasemagunyeni abakumgangatho ophezulu kwezokhenketho babe nethuba lokutshintshiselana ngezimvo kunye nokuphononongwa komgaqo-nkqubo onxulumene nefuthe lobhubhane we-COVID-19 kumacandelo ohambo nakwezokhenketho kunye nokuchonga iindawo ezibonakalayo zokusebenzisana phakathi kwamazwe angamalungu ukukhuthaza ukwakhiwa kwawo kunye Ukubuyela kwimeko yesiqhelo kulandela ubhubhane.
UMphathiswa uBartlett kungoku nje unguSihlalo weQela eliSebenzayo le-OAS elikwinqanaba eliphezulu, neliphuhlisa isicwangciso sokusebenza, sokubuyisela amashishini eenqanawa kunye neenqwelo moya.
Iqela elisebenzayo lelinye lezine, ezabhengezwa ngexesha leseshoni yesibini ekhethekileyo ye-OAS Inter-American Committee on Tourism (CITUR) ebibanjwe nge-14 ka-Agasti ka-2020, ukuququzelela ukubuyela kwimeko yesiqhelo nangokufanelekileyo kwamacandelo ohambo nokhenketho.